Caalamka, 30 August 2018 page pageno
Khamiis 30 August 2018
Canada: Wasiir hore oo Ajinabi Nacayb lagu Eedeeyey
Wasiirki hore ee Arrimaha Dibadda ee Canada ayaa maalmihi la soo dhaafey boggiisa Twitter-ka ku soo daabacayey qoraallo loo arkey in ay yihiin kicin dadka siyaasada midigta fog aaminsan ee reer Kanada.
Maalinta Bani'aadannimada Caalamiga ah
Maanta oo kale 19 August waxaa Dunada laga xusaa maalinta Bani,adamnimada iyadoo xuska maalintan ay Qaramada Midoobya u asteesay 19 August 2003dii xiligaas oo shaqaalo samafalka ka shaqeyaa lagu dilay Magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq
Gudashada Xajka oo Maanta Bilaabatay
Ku dhawaad laba milyan oo ruux ayaa sannadkaan ka qeybgalaya gudasha waajibaadka xajka kuwaas oo ku sugan Xaramka Barakeysan ee magaalada Maka ee dalka Sacuudiga
Imran Khan oo loo dhaariyay xilka R.W Pakistan
Halyeeygii hore ee ciyaaraha Kirketka dalka Pakistan Imran Khan, ayaa maanta oo Sabti loo dhaariyay inuu noqdo Ra’isulwasaaraha cusub ee Pakistan.
Bamki lagu laayay carruurti reer Yemen oo Mareykanka lagu sameeyay
Warbixin ay Khubarada dhinaca hubku soo saareen ayaa lagu sheegay in bambaanadii uu Isbaheysiga Sacuudigu ku duqeeyay bas carruur siday -oo gudaha dalka Yemen ay aheyd mid- uu Mareykanku farsameeyay.
Afgahnistan: 40 Qof oo ku Dhimatay Weerar Is-qarxin ah
Weerar isqarxin ah oo ka dhacay saldhig milatari oo ku yaala waqooyiga Afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 ciidamada ammaanka ah, kaasoo ah kii ugu dambeeyay weerarro is xigxigay oo ka dhacay waddanka kaasoo sababay in dhimasho iyo dhaawac culus uu soo gaaro xoogagga dowladda.
Talyaaniga: Tirada Dadka ku Dhintay Buundadii Duntay oo Korortay
Masuuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa sheegay Arbacan maanta ah in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo wayn oo ay baabuurtu maraan oo ku taalla magaalada Genoa.
Dad ku dhintay buundo ku duntay Talyaaniga
Ugu yaraan 30 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen kadib marki ay duntay buundo ku taalla magaalada Genoa ee waqooyigalbeed dalka Talyaaniga.
Qareenka wadaadka Mareykanka ah ee Turkiga loogu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira argagixiso ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay, in eedeysanuhu uu Talaadada maanta ah dalbaday in lasii daayo, kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa
London: Booliska oo Xirey Nin Gaari Dad Jiirsiiyay
Booliska magaalada London ayaa sheegay in nin watay baabuur uu maanta jiirsay dad lugeynayay iyo kuwo watay baaskiil oo marayay agagaarka Aqalka Baarlamaanka Britian.
Turkiga oo Qorshe u Sameeyay Xasilinta Qalalaasaha Dhaqaale
Bankiga Dhexe ee Turkiga ayaa maanta ku dhawaaqay qorshe lagu xasilinayo qalalaasaha dhaqaale ee soo food saaray Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa isna magaalada Ankara ka sheegay in Turkiga la geliyay go’doon dhaqaale.
Talibaan iyo Ciidanka Afghanistan oo Dagaallamaya Maalinkii 4-aad
Iska horimaad u dhexeeya ciidamada amaanka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa maalintii afaraad ka socda magaalada Ghanzi oo ku taala koonfur bari dalka Afghanistan.